Mnangagwa promises good times as rival Chamisa raise the ante on nation-wide protests - The Zimbabwe Mail
HomeMainMnangagwa promises good times as rival Chamisa raise the ante on nation-wide protests
November 5, 2018 Staff Reporter Main, Politics 0
MASVINGO – President Mnangagwa yesterday exhorted Zimbabweans to unite and remain strong in the face of prevailing economic difficulties saying the challenges confronting the country will soon be overcome, paving way for an epoch of prosperity.
Mnangagwa called on Zimbabweans to love their country,describing those bent on instigating demonstrations and sowing the seeds of instability in the country as ill-adviced and languishing in darkness away from God’s grace.
This comes as MDC-Alliance leader Mr Nelson Chamisa, who lost to President Mnangagwa in the July 30 presidential election, has threatened to spearhead nationwide demonstrations in a bid to gain political power through the backdoor.
Mnangagwa challenged the present generation of Zimbabweans to be at the forefront of finding solutions to some of the country’s challenges.
Mnangagwa, who was accompanied by First Lady Auxillia Mnangagwa, donated a tractor to Bishop Mutendi, five tonnes of top dressing fertiliser, another five tonnes of Compound D fertiliser and a tonne of maize seed to the ZCC.
Present at the event were senior Government and Zanu-PF officials among them State Security Minister Owen Ncube and Masvingo Minister of State Ezra Chadzamira among others.